Toliara : nikatona ny fivarotan-kena | NewsMada
Toliara : nikatona ny fivarotan-kena
Miverina indray ny olana momba ny omby any Toliara. Midangana ny saran’ny famonoana omby, ka tsy eken’ireo tompon’ny fivarotan-kena.
Nisondrotra ny vola aloa amin’ny famonoana omby any Toliara. Lasa 8.000 Ar izany isaky ny omby iray raha 3.000 Ar teo aloha. Tsy manaiky ireo tompon’ny fivarotan-kena, ka nitokona tsy nivarotra, ny alarobia teo. Hena tsy lany ny talata sisa no namidin’ny mpivarotra vitsy, fa tsy nisy mihitsy ny hena vaovao.
Raha tsy nivaha ny olana, nitohy omaly alakamisy ny fitokonana. Nangataka ho ferana 4.000 Ar ireo tompon’ny omby vonoina, ary efa nisy ny fifampidinihana sy ny fampandrenesana ny lehiben’ny distrika, natao ny alatsinainy teo. Saingy tsy mbola nisy vahaolana tinapaka sy ny marimaritra iraisaina, hatramin’ny nanoratanay. Nitohy teny amin’ny biraon’ny kaominina Mitsinjo ny fifampidinihana, toerana misy ny famonoana omby.
Tampoka ho an’ny olona rehetra ny zava-misy ka voatery nividy zavatra hafa hatao laoka ny mpanjifa. Mbola mitady vahaolana miaraka amin’ireo tompon’andraikitra, ireto mpivarotra ireto ary tsy hivarotra mihitsy raha tsy midina ho 4.000 Ar ny vola aloan’izy ireo isaky ny omby iray.